Kumutungamiriri weNehiroti.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 5 Teereraiwo mashoko angu, Jehovha;+Inzwaiwo kugomera kwangu. 2 Teereraiwo kuchemera kwangu kubatsirwa,Imi Mambo wangu naMwari wangu, nekuti ndinonyengetera kwamuri. 3 Jehovha, muchanzwa inzwi rangu mangwanani;+Mangwanani ndichataurawo zvinondinetsa,+ ndomirira nechivimbo. 4 Nekuti hamusi Mwari anofarira zvakaipa;+Hapana munhu akaipa angaramba ainemi.+ 5 Hapana munhu anozvikudza angamira pamberi penyu. Munovenga vese vanoita zvakaipa;+ 6 Muchaparadza vaya vanoreva nhema.+ Jehovha anosema vanhu vanoita zvemhirizhonga nevanonyengera.*+ 7 Asi ndichauya kuimba+ yenyu nekuti mune rudo rukuru rusingachinji;+Ndichakotama ndakatarisa kutemberi*+ yenyu tsvene ndichikutyai nekukuremekedzai. 8 Jehovha, nditungamirireiwo mukururama kwenyu nekuti ndakakombwa nevavengi;Itai kuti nzira yenyu ijeke pamberi pangu.+ 9 Nekuti hapana chavanotaura chingavimbwa nacho;Hapana chiri mukati mavo kunze kwekurongera vamwe zvakaipa;Huro dzavo iguva rakavhurika;Vanonyengera nerurimi rwavo.+ 10 Asi Mwari achavati vane mhosva;Mazano avo avanoronga ndiwo achaita kuti vawe.+ Ngavadzingirwe kure nekuda kwezvitadzo zvavo zvakawanda,Nekuti vakakupandukirai. 11 Asi vese vanopotera kwamuri vachafara;+Vachagara vachipembera nemufaro. Muchadzivisa vanoda kuvakuvadza,Uye vaya vanoda zita renyu vachakufarirai. 12 Nekuti imi Jehovha muchakomborera munhu wese akarurama;Muchavadzivirira nekuvafarira kwenyu sekudzivirira kunoita nhoo huru.+
^ Kana kuti “munhu anodeura ropa neanonyengera.”
^ Kana kuti “kunzvimbo.”